आधारभूत र प्राविधिकरुपमा कस्तो छ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको अवस्था ?
काठमाडौं : फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९६.१३ प्रतिशत बढी हो । गत वर्ष यसले ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी ८५ करोड ३१ लाख रुपैयाँले बढेर १ अर्व ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्य सञ्चालन आम्दानी पनि २९ करोड ७६ लाख रुपैयाँले बढेर ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कर्मचारी खर्च ३२.४६ प्रतिशत तथा अन्य सञ्चालन खर्च १४.८५ प्रतिशतले बढेको छ । यसले चैत मसान्तसम्म ६ करोड ५३ लाख रुपैंया राइट ब्याक गरेको छ । समीक्षा अवधिमा फरवार्डको चुक्ता पुँजी ३५ प्रतिशतले बढेर ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, जगेडा कोष ६४.४६ प्रतिशत बढेको छ । यसअवधिमा १० अर्व १४ करोड रुपैयाँ सापटी तथा ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २० अर्व ५ करोड ४१ लाख रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । नाफासँगै यसको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । फरवार्डको प्रतिसेयर आम्दानी ७७ रुपैंया ७ पैसाले बढेर १११ रुपैयाँ ९७ पैसा पुगेको छ ।
गत २ साताको फ्लोरसिटबाट हेर्दा ४५, ४२ र ५० नम्बर ब्रोकरबाट सबैभन्दा बढी सेयर खरिद भएको छ भने तथा ४४, ४८ तथा १३ नम्बर ब्रोकरबाट सबै भन्दा धेरै कित्ता सेयर बिक्री भएको देखिन्छ । ब्रोकर नं. ४४ बाट करिब ४५ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएको छ ।
खरिद मूल्यको हिसाव गर्दा २२ सयदेखि २४ सय ५० रुपैयाँको बीचमा ८ हजार ९८० कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ब्रोकर कमिसनसँग समायोजन गर्दा २२ सय ६६ देखि २५ सय २२ रुपैयाँसम्म लागत पर्न आउँछ । महँगो मूल्य भएकाले फरवार्ड तुलनात्मकरुपमा कम कारोबार हुने कम्पनीमध्ये पर्दछ ।
अघिल्लो साता स्थिर रहेको फरवार्डको मूल्य गत साता राम्रोसँग वृद्धि भयो । बिहीबार कारोबार बन्दभएसँगै तल र माथि लामो स्याडो सहितको हरियो मैनबत्ति बनेको छ । साताको सुरुवातमा आक्रामक रुपमा खरिद भए पनि अन्तिम दिनमा प्रोफिट बुक गरेको देखिन्छ ।
१४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स
साप्ताहिक चार्टमा १४ दिने आरएसआई ४९ बिन्दुमा आएको छ । गत बुधवार मूल्यले २ महिनायताकै उचाई छुन पुगेसँगै आरएसआई ६० को बिन्दुसम्म पुगेको थियो । यस अर्थमा यसको भाउ बुलिस मोमेण्टममा रहेको देखिन्छ । दैनिक १४ दिने आरएसआई भने ७१ बाट ६४ को विन्दुमा आएको छ ।
गत मंगलबार एमएसीडी र सिग्लन रेखाले बुलिस क्रस गरेको छ । त्यस्तै, हिस्टोग्राम पनि सेन्ट्रल लाइनबाट माथि लाग्दै गएको छ । यस अर्थमा बुलिस मोमेण्टम रहेको संकेत गर्दछ ।
गत मंगलवार बोलिङगरको माथिलो ब्याण्डले ब्रेक गरेर माथि गएको थियो । यसले आगामी दिनमा बजार मूल्यमा उच्च उतारचढावको संकेत गर्दछ ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ९६.१३ प्रतिशत बढी हो । फरवार्डको खुद ब्याज आम्दानी ८५ करोड ३१ लाख रुपैयाँले बढेर १ अर्व ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले चैत मसान्तसम्म ६ करोड ५३ लाख रुपैंया राइट ब्याक गरेको छ । चुक्ता पुँजी ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको यसको जगेडा कोष ६४.४६ प्रतिशत बढेको छ ।
फरवार्डको प्रतिसेयर आम्दानी १११ रुपैयाँ ९७ पैसा पुगेको छ । प्राविधिकरुपमा मूल्यलाई हेर्दा गत साता भाउ बढेको थियो । गत साता मात्रै फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि प्रकाशित भएको थियो । नाफा आकर्षकरुपमा वृद्धि भएकाले पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गत साता लामो आकृतिको हरियो मैनबत्ति आकृति बनेको छ ।
१४ दिने आरएसआई भने ७१ बाट ६४ को बिन्दुमा आएको छ । एमएसीडीले सिग्लन रेखालाई तलबाट माथि क्रस गरेको छ भने हिस्टोग्राम पनि सेन्ट्रल लाइनबाट माथि गएको छ । बोलिङगर ब्याण्ड माथिलो ब्याण्ड ब्रेक गरेर माथि गएको छ भने २० दिने मुभिङ एभरेज भन्दा माथि मूल्य रहेको छ । यस अर्थमा भाउ बढ्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ । समग्रमा सबै प्राविधिक सूचकले दीर्घकालमा सकारात्मक अवस्थाको संकेत गरेको छ ।
सावधानी : यो अध्ययन आफैंमा पूर्ण होइन । लगानी गर्नुअघि आफैंले अध्ययन–अनुसन्धान गरेरमात्र निर्णय लिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।